Ny tsy fitoviana eo amin'ny rindrambaiko maimaim-poana, rindrambaiko manana sy loharano misokatra | Avy amin'ny Linux
Ny tsy fitoviana eo amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ny rindrambaiko manana sy ny loharano misokatra
Samy efa nandre momba rindrambaiko maimaim-poana na loharano misokatra (loharano misokatra) isika rehetra, nefa maro ny olona tsy mahalala ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny maha samy hafa ireo teny ireo. Amin'ny tontolo tsy computing dia tsy re matetika ireo hevitra ireo fa tena misy isan'andro izy ireo satria misy fiantraikany amin'ny programa misy fitaovana elektronika, toy ny solosaina, takelaka na Smartphone.
Ny rindrambaiko manana dia miaro ny tombotsoan'ny orinasa mivarotra azy fotsiny ary tsy azon'ireo any ivelany ovaina mba hanomezana fahafaham-po ny filana manokana. Fa kosa, Ny rindrambaiko maimaimpoana na malalaka dia azon'ny rehetra idirana ary azo ovaina mba hamaliana ny fepetra takian'ny tsirairay.
Ny programa iray dia azo raisina ho rindrambaiko maimaim-poana rehefa manaja ireo fahalalahana tena ilaina efatra:
Freedom 0: mamela anao hihazakazaka ny programa na izany aza tianao.
Freedom 1: azonao atao ny mandalina ny kaody loharano an'ny programa ary afaka manova azy ianao, miaraka amin'ny hevitra fa afaka manao hetsika ilaina izany.
Freedom 2: mamela anao hanao sy hizara kopia marina amin'ilay programa isaky ny tianao ary manampy ny hafa.
Freedom 3: afaka mandray anjara amin'ny vondrom-piarahamonina ianao, amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fanaovana na fizarana kopia miaraka amin'ireo kinovan'ny programa novainao.
Araka ny voalazan'i Richard Stallman, mpanorina ny Free Software Movement, dia nilaza fa “Ireo fahalalahana ireo dia manan-danja tokoa, tsy ho tombotsoan'ny mpampiasa fotsiny fa ho an'ny fiarahamonina iray manontolo, satria mampiroborobo ny firaisankina. Mitombo ny fifandraisany noho ny kolontsaintsika sy ny asantsika isan'andro mifamatotra amin'ny tontolo nomerika ”.
Ho an'ny sekoly, ny fananana rindrambaiko maimaimpoana dia tombony tsy voatrandraka satria mamela azy ireo hitahiry vola amin'ny tsy mila fandoavana alàlana hampiasa rindrambaiko manana. Ny fiononana amin'ny fahafahany mandalina ireo programa dia zava-dehibe ho an'ireo izay te hianatra programa, satria ny famakiana ny kaody an'ny hafa dia ho fampianarana na hamahana olana.
voambolana loharano misokatra (loharano misokatra) dia teraka mba hisorohana ny tsy fahazoan-kevitra mety hitranga amin'ny foto-kevitra free software (rindrambaiko maimaimpoana). Amin'ny teny Anglisy, ity teny ity dia adika ho afaka fa amin'ity tranga ity dia tena manondro ny fahalalahan'ny programa fa tsy ny vidiny.
Ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra dia loharano misokatra, fa tsy ny programa loharano misokatra rehetra dia rindrambaiko maimaimpoana. Ny tsy fitoviana dia ao amin'ireo fahazoan-dàlana azo ampiasaina amin'ny programa: ny sasany tsy dia manaiky loatra noho ny hafa ary tsy manaja firy ireo fahalalahana voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny tsy fitoviana eo amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ny rindrambaiko manana sy ny loharano misokatra
Roberto Ronconi dia hoy izy:
Manoro hevitra ny latabatra fampitahàna aho ao amin'ny lahatsoratra Momba ny fahazoan-dàlana sy simba hisokatra loharano ao amin'ity bilaogy ity https://blog.desdelinux.net/sobre-las-licencias-y-los-perjuicios-al-codigo-abierto/
Valiny tamin'i Roberto Ronconi
mantisfistjabn dia hoy izy:
Ny tabilao fampitahana an'io lahatsoratra io dia hadalana tanteraka, efa voalaza io fotoana io. Ny mamporisika azy dia tsy mitombina.
Mamaly an'i mantisfistjabn
Franz dia hoy izy:
Inona no hadalana tsy adaladala resahinao? Raha bilaogy momba rindrambaiko sy teknolojia malalaka sy misokatra ity dia tena tsara ho an'ireo mpampiasa vao manomboka amin'ity tontolon'ny Linux sy rindrambaiko maimaimpoana ity ity lahatsoratra ity.
Valiny tamin'i Franz
Martín dia hoy izy:
ARAKA NY LAZAIN'NY ao amin'ny pejin'ny GNU.ORG dia misy fahasamihafana eo amin'ny rindrambaiko maimaim-poana sy ny loharano misokatra.
Rindrambaiko loharano misokatra ("Source open")
Ny olona sasany dia mampiasa ny teny hoe "loharano misokatra" mba hilazana sokajy iray na mihoatra mitovy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Na izany aza, tsy mitovy karazana rindrambaiko mitovy izy ireo: manaiky lisansa sasany heverinay fa tery loatra izy ireo, ary misy lisansa rindrambaiko maimaimpoana izay tsy neken'izy ireo. Saingy, ny fahasamihafana misy eo amin'ireo takelaka roa ireo dia vitsy: saika ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra dia loharano misokatra ary ny rindrambaiko loharano misokatra rehetra dia maimaim-poana.
Aleonay ny teny hoe "rindrambaiko maimaimpoana" satria manondro fahalalahana, izay tsy misy ilay teny hoe "loharano misokatra."
NY loharano: http://www.gnu.org/philosophy/categories.html
ARY Ireto tsy fitoviana ireto dia tokony hotondroina hahalala ny fomba fanavahana azy ireo
AO amin'ny REVOLUTIONOS DOKUMENTERA IZAO DIA TSY METY INDRINDRA INDRINDRA IZAO
Valiny amin'i MARTIN
Sebastian Meza dia hoy izy:
Ny tiany horesahina dia hoe diso ny fampahalalana nomeny, tsy maninona ny mampahafantatra, fa raha hanao azy isika, ny idealy dia ny fampahalalana azo antoka ... ary raha tsapanao rehefa mamaky an'io lahatsoratra io ianao, ny latabatra izay miseho dia misy teboka vitsivitsy izay mifanohitra tanteraka, ary ao anatin'ireo fanehoan-kevitra ireo ihany dia ho azonao ny antony.
Valiny tamin'i Sebastian Meza
Hankasitrahako fa ny fanehoan-kevitra ratsy dia ratsy ho an'ny rehetra, satria ny fanampiana apetrak'izy ireo amin'ny pejina ary ny olona liana hanampy antsika dia tena mahasoa ny rehetra, raha misy teoria sy hevitra tsara kokoa ho an'ny rehetra dia avoaho ny tenanao ary fadio ny mamorona fanamarihana manimba ary manandrana mamorona fanehoan-kevitra mahasoa ho an'ny mpitsidika rehetra asta sy pejy hafa ,,,,,,,,,,,,,,,,………………… ..————- MISAOTRA ANAO— ———– …………………… ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mamaly an'i emmanuel
Thunderbird 45 dia eto
NixOS 16.03 dia eto